यस्ता रोग लागेका व्यक्तिलाई अमृत समान हो बेल…
काठमाडौं । एउटा बेल ९ वटा रोगको उपचारमा उपयोगी हुन्छ । यो धर्मिक कार्यमा उपयोगी भएपनि यसको प्रयोग स्वास्थका लागी अमृत समान हुन्छ । पाकेको बेल त स्वादमा पनि मिठो हुन्छ । बेल खाँदा पेट दुख्ने देखी पित्तको रोग ठिक पार्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बेल सुगरका बिरामीको लागि पनि लाभदायिक हुन्छ । बालबेललाई कुटेर बिहान/बेलुका एक/एक चम्चा काँडा पकाएर खाने गरे पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरु ठीक हुन्छ । बाल बेल भनेको काँचो चाना पारेर सुकाएर राखेको बेल हो ।
अमिलो पानी आउने, चिया खानै नहुने रोगीले पनि नियमित बालबेलको चिया खाने गरेमा पित्तको रोग ठिक हुन्छ र यसले धित पनि मार्छ । साथै यसको सेबनले बान्ता रोक्न पनि सहयोग गर्छ । बेलपत्रको धूलो एक चम्चामा एक चम्चा मह मिसाएर बिहान/बेलुका खाने गरेमा दमको रोग समन हुँदै जान्छ ।
दाँतको गिजाको रोगमा बेलपत्रको धूलोमा तोरीको तेल तीन/चार थोपा, नुन एक चिम्टी र एक चिम्टी बेसार हालेर औंलाले बिस्तारै गिजामा मालिस गर्ने र तातो पानीले केही दिन कुल्ला गर्ने गरेमा दशरपन्ध्र दिनमै ठीक हुन्छ । बेलपत्रको धूलो एक चम्चामा एक चम्चा मह मिसाएर खाएमा रुघा, खोकी र ज्वरो पनि ठीक हुन्छ ।
अमृतीय गुण भएको फल बेल
‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्।’ यो उक्ति नेपाली समाजमा निकै प्रचलित छ। बेल पाक्दा कागलाई हर्ष होस् या बिस्मात, तर मानव जीवनमा भने बेल पाक्न थालेपछि बिस्मात होइन्, हर्षको बहार नै छाउँछ।
बेल यस्तो फल हो, जसले शरीरका सम्पूर्ण भागलाई हित मात्र पुर्‍याउँछ। गर्मी मौसममा यसका फाइदा त झन् व्यापक छन्। नेपालमा प्रशस्त पाइने मौसमी फल बेल पेटसम्बन्धी विकार भएका मानिसलाई लाभदायक मानिन्छ । यसमा एन्टिफंगल, एन्टिप्यारासाइटिक गुण हुन्छ, जो पाचनका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
यति मात्र नभई बेलमा रेचक (ल्याक्जेटिभ) गुणसमेत हुन्छ । यसको नियमित सेवनले कब्जियत जरैदेखि समाप्त हुने मान्यता छ । यो मधुमेह रोगीका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । फलको पातलाई पिसेर रस खानाले मधुमेहमा राहत मिल्ने मान्यता छ । बेलमा धेरै प्रकारका पोषक तत्व हुन्छन् । यी पोषक तत्वको सहयोगले मिर्गौलाको विषनाश (डिटक्सिफाई) गरेर शरीरको फोहोर बाहिर निकालिदिन्छ ।
बेलमा शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, क्याल्सियम, फसफोरस, आइरनका साथै भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। पाकेको बेल खानाले शरीरलाई निकै फाइदाजनक हुन्छ साथै यसले शरीरमा शक्ति प्रादान गर्छ र विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ।
बेलको महत्व हिन्दु धर्म अन्तर्गत ऋग्वेद, शिवपुराण, अग्निपुराणमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। शिव, शक्ति, गणेश आदिमा बेलपत्र चढाइन्छ। शिवरात्रिको अवसरमा समेत प्रत्येक शिवालयमा प्रशस्त बेलपत्र चढाइन्छ।
मानव स्वास्थ्यका लागि बहुगुणी मानिएको बेल लोप हुने संघारमा पुगेको छ। वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने क्रमसँगै बेलका रूखसमेत सखाप हुन थालेका छन्। बेलको महत्वका बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुँदा बेलका रूख दाउरा र सोत्तरका रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ। रूख दाउराका रुपमा प्रयोग हुन थालेपछि बेलको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
बाहिरी आवरण एकदम कडा हुने यो फल भित्र ८–१५ वटा कोठाहरू हुन्छन्, जसमा बीउ र सुन्तला रङको गुदी भरिएको हुन्छ। यसको प्रयोग हुने भाग फल, जरा र पातहरू नै हुन्। यसको बिरुवा भारतको मौलिक बिरुवा मानिन्छ। बेल म्यानमार, इन्डोचीन, मलेसियामा पाइन्छ। नेपालमा बेल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब ११०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ।
हाल बेलको उन्नत जातका बिरुवाको खेती गर्ने चलन पनि छ। फलको माग प्रशस्त भएकोले यसको खेतीप्रति रुचि बढेको हो। बेलको जरा आयुर्वेदिक औषधीय पद्धतिमा तयार गरिने ‘दसमूल’ मा प्रयोग गरिन्छ। नपाकेको फल झाडापखाला र आउँमा उपयोगी मानिन्छ भने पाकेको फल कब्जियतमा प्रयोग गरिन्छ। यसको पात, फल र जरा मधुमेह रोगमा उपयोगी हुने कुरा हालका केही प्रयोगहरूले सिद्ध गरिदिएका छन्। यसको पाकेका फलको गुदीबाट सर्बत पनि बनाउने गरिन्छ।
अंग्रेजीमा उड एपल, एलिफेन्ट एपल, मंकी फ्रुट भनेर चिनिने यो फलको जुस र जाम क्यानमा व्यापक पाइन्छ। बेलको संरक्षणका लागि सरकारले पनि विभिन्न परियोजनामार्फत व्यापक लागनी अगाडि बढाएको छ। पाक शिक्षामा पनि बेललाई अत्यधिक मात्रमा प्रयोग गरिन्छ। बेलबाट विभिन्न मिठाइ तथा केक पनि बनाउन सकिन्छ। बेलको जुसबाट विभिन्न ककटेल र मकटेल पनि बनाइन्छ। बेलका परिकारहरु नेपालका पाँचतारे होटलदेखि स्तरीय रेस्टुरेन्टमा समेत जुसका रुपमा विभिन्न परीकार बनाएर पस्किने गरेको पाइन्छ।
केके पाइन्छ बेलमा?
कार्बोहाइडेड ३१.८ एमजी, चिल्लो पदार्थ ०.३ एमजी, प्रोटिन १.८ एमजी, भिटामिन ५५ एमजी, भिटामिन सी ६० एमजी, क्याल्सियम ८५ एमजी, पोटासियम ६०० एमजी, फाइबर २.९ एमजी, शक्ति १३७ केजी क्यालोरी।
कसरी खाने बेल?
बिहान खाली पेटमा पानीमा मिसाएर बेलको पात या रस पिउन सकिन्छ। सलादको रुपमा खाना खानुअघि खान सकिन्छ। नियमित रुपमा मात्रा मिलाएर जुस पिउन सकिन्छ। डेजर्टको रुपमा खानाको अन्तिम समयमा पनि बेलको मात्रा लिन सकिन्छ। बेलको जाम पनि मात्रा मिलाएर नियमित लिनाले फाइदा पुर्‍याउँछ।
– शरीरमा उब्जने विकार रगतलाई शुद्धीकरण गर्न बेल फल उत्तम मानिन्छ।
– कानसम्बन्धी समस्या भएकाहरुका लागि बेल गुणकारी मानिन्छ।
– पेटसम्बन्धी अल्सरको समस्या हुनेका लागि बेल अमृत समान मानिन्छ।
– युरिक एसिड हुनेका लागि पनि बेलले धेरै राहत दिन्छ।
– अन्य फलको तुलनामा बेलमा धेरै कम कोलेस्टेरोल हुने हुँदा स्वस्थ्यका लागि हितकारी मानिन्छ।
– नुन, बेसार, तेल बेलमा मिसाएर दाँत माँझ्नाले गिजासम्बन्धी समस्या निदान गर्छ।
– आधा चम्चा बेलको फूल पानीसँग खाने गरेमा एक दुई मात्राले नै बमन रोक्न मद्दत हुन्छ।
– बेलपत्रको धूलो एक चम्चामा एक चम्चा मह मिसाएर खाएमा रुघा, खोकी र ज्वरो पनि ठीक हुन्छ।
– बेलको एक मुठी पात पानीमा पिनेर मिस्री हालेर खाएमा झाडापखाला निको हुन्छ।
– बेलपत्रको रस नित्य एक–एक चम्चा बिहान–बेलुका पिउने गरेमा अजीर्ण, पुरानो आउँ रगत आदि रोग ठिक हुन्छ।
– बेलपत्रको धूलो एक चम्चामा एक चम्चा मह मिसाएर बिहान बेलुका खाने गरेमा दमको रोग निमन हुँदै जान्छ।
– सुकाएको बेलको बोक्रा कुटेर बिहान–बेलुका एक–एक चम्चा हालेर काँडा पकाएर खाने गरेमा पेटसम्बन्धी सम्पूर्ण रोग ठीक हुन्छ।
– अमिलो पानी आउने, चिया खानै नहुने रोगीले पनि नियमित बेलको धुलोको काँडा खाने गरेमा पित्तको रोग ठिक हुन्छ।
– बेलको सेवनले खाना पचाउन मद्दत गर्नुका साथै शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ।
– यसले बच्चाको पेटमा भएका किरा नष्ट पार्नुका साथै बच्चाको हड्डी बलियो बनाउनमा मद्दत गर्छ।
– बेलको नियमित सेवनले आवाज सुरिलो बनाउन मद्दत गर्नुका साथै मुटुसम्बन्धी रोग निदान गर्छ।
– पायल्स रोगका लागि पनि बेल एक उत्तम औषधि मानिन्छ।
– मिर्गौलाका लागि पनि बेल उत्तम फल हो।
– सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई पनि बेल फलले फाइदा पु¥याउँछ।
– बेलले मलेरिया लागेको व्यक्तिलाई प्राकृतिक रुपमा फाइदा पु¥याउँछ।
(बुढाथोकी, सोल्टी क्राउन प्लाजाका सु–सेफ हुन्)
प्रकाशित मिति August 27, 2019